Nagarik News - ‘संगीत हलुका विषय होइन'
हर्षु राई, गायिका
दोस्रो एल्बम निकालेको १० वर्ष पुग्न लाग्यो। अब तेस्रोका लागि गीत रेकर्ड गरिरहेकी छु। कन्सर्टतिर गाइरहेकी छु।
पहिला जनवादी गायिका भनेर चिनिनुहुन्थ्यो। अचेल बढी आधुनिक गीततिर लाग्नुभयो नि?
२०४७ सालपछि हिमायती समूहबाट ‘चेलीको सिउँदो पुछियो', ‘आकाशमा उड्ने चरी', ‘झरझर झरना' जस्ता परिवर्तनका गीत गाइयो। पछिल्लो समय चाहिँ आधुनिक, गजल र देशप्रेमका गीत रेकर्ड गरिरहेकी छु। तर, परिवर्तनका गीत पनि गाउन छाडेको छैन।
उपमहानगरपालिकाको जागिरसँगै संगीतलाई कसरी समय दिनुहुन्छ?
धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नं.१० को सचिव भएकाले दिनभर त्यहीँ बस्छु। व्यस्त भइन्छ तर बिहान, बेलुका र फुर्सदको समय संगीतमा लगाउँछु। मन भए समय मिलाउन सकिन्छ।
संगीत क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो?
म खोटाङमा जन्मिएँ, त्यहीँ पढेँ। स्कुलमा गाउन भनेपछि हुरुक्क हुन्थेँ। त्यसपछि धरान आएर हिमायती समूहमा गाएँ। २०५१ सालमा पहिलो एल्बम ‘स्मृति' निकालेँ। त्यसको १० वर्षपछि दोस्रो एल्बम ‘प्रीति' निकालेँ।
तेस्रो एल्बममा कस्ता गीत हुनेछन्?
तेस्रो एल्बममा आधुनिक, गजल र देशभक्तिपूर्ण गीतहरू समेट्दै छु। यो एल्बमलाई विविधतायुक्त बनाउने विचार छ।
संगीत के हो?
संगीत एउटा साधना हो, जो कहिल्यै सकिँदैन। संगीत हलुका विषय होइन।
प्रस्तुतिः गोपाल दाहाल
शुक्रबार सम्पादकीय : कठ्याङ्ग्रिएको सहमति
राजधानी मीन पचासको ठन्डीमा कठांग्रिएको छ। देशका अन्य भागमा पनि ठन्डीले जनजीवन प्रभावित भइरहेको समाचार आइरहेका छन्। बढ्दो चिसोसँगै राजनीतिको तापक्रम पनि क्रमशः घट्दै गएकाले जनता थप ठन्डी महसुस गर्दैछन्।
'स्टेज नचढी स्रोताले नचिन्ने रहेछन्'
लोकगीत 'सिमेसिमे पानीमा' गाएर चर्चित बनेकी रेखा शाह यतिबेला आधुनिक गायिकाका रूपमा चिनिन्छिन्। चार वटा सोलो एल्बम बजारमा ल्याइसकेकी छिन्। उनी आफ्ना गीतमा आफँै मोडलिङ पनि गर्छिन्। पछिल्लो समय उनले...